Photopea, safidy an-tserasera maimaimpoana amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Photopea, safidy an-tserasera maimaim-poana amin'ny Photoshop
Camila Exposito | | Fitaovana famolavolana, maro
Rehefa mieritreritra isika Fandaharana famolavolana, ny zavatra voalohany tonga ao an-tsainao dia ny fonosana adobe. Ity dia andiana programa tena miavaka sy miasa izay manampy antsika hanova sy hamorona mora kokoa ny atinay. Na izany aza tsy ny rehetra no mahavita famandrihana avy amin'ny Adobe, na angamba amin'ny fotoana sasany dia mila manitsy zavatra isika ary tsy manana ny fitaovantsika eny am-pelatanana.
Manolotra anao aho izao Photopea, fampiharana an-tserasera tsy andoavam-bola iray izay ahafahantsika manova sy mamorona sary miaraka amina fitaovana tena mitovy amin'ny ampiasain'ny Photoshop, ao anaty iray tsotra sy haingana.
1 Mahafantatra an'i Photopea
2 Mianatra mampiasa Photopea
Mahafantatra an'i Photopea
Photopea dia fitaovana noforonin'ny programmer Czech manontolo Ivan Kutskir nandritra ny taona nandalovany ny asany. Ny fampiharana dia misy ho an'izay mila azy maimaim-poana, ary mamela ny hiasa na dia Fisie .PSD. Ny fahombiazan'ny Photopea dia nahagaga, nahatratra ny mpampiasa tapitrisa sy sasany isam-bolana. Izy io koa dia manana kinova Premium fandoavam-bola miaraka amin'ny safidy bebe kokoa, ary miaraka amin'ny famandrihana azo havaozina rehetra Andro 90. Ny mpamorona ny fitaovana dia nisafidy io fotoana io fa tsy famandrihana isan-taona ka ny mpampiasa izay tsy mampiasa izany dia tsy mila mandoa serivisy izay tsy araraotin'izy ireo.
Ny lazan'ny Photopea dia vokatry ny zava-misy fa tena intuitive ary mora ampiasaina. Ny interface dia mitovy amin'ny Photoshop ary izany koa maimaim-poana. Ny sehatr'asa sy ny sarin'ireo fitaovana dia mitovy ary manampy antsika hizatra izany raha toa ka efa mahay mampiasa Photoshop fa tsy mitovy amin'ny rindrambaiko fanovana hafa.
Mianatra mampiasa Photopea
Mba hitsapana ny fomba fiasan'ilay fitaovana, dia nanapa-kevitra ny hanao fanovana aho tsotra amin'ity sary ity.
La saturation ny loko dia toa ambany kely amiko, ka novako ny ambaratonga amin'ireo fantsona rehetra ary nanasongadina ny fantsona mena.
Avy eo nampiasaiko ilay fitaovana Safidy haingana hisafidianana olona ary namorona sosona vaovao aho tamin'io fifantenana io. ny didy mamorona sosona vaovao avy amin'ny fifantina dia Ctrl + J, mitovy amin'ny Photoshop. Rehefa avy nifantina azy aho dia namorona boribory boribory fotsy tsy misy drafitra ary napetrako tao ambadiky ny olona. Aorian'izay, manana aho rasterized ny sosona ary apetaka a gaussian blur boribory lavalava mba hamoronana vokatra halo izay manasongadina ireo tarehimarika.
Farany, nifidy iray aho typografika maivana manampy soratra amin'ny loko misy eo amin'ny sary, ary farany mahitsizoro a loko tsy miandany miaraka amin'ny mangarahara ao ambadiky ny lahatsoratra hampiavaka azy somary misimisy kokoa. Ity no vokatra farany.
Araka ny hitanao, ny fitaovana sy ny valiny dia mitovy amin'ny zavatra ho azontsika amin'ny Photoshop, fa maimaim-poana. Manoro hevitra anao aho hanandrana an'i Photopea, satria raha ny fahitako azy dia mendrika izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Photopea, safidy an-tserasera maimaim-poana amin'ny Photoshop
Sary 150.000 XNUMX hanehoana ireo loko miafina amin'ny volana